Ny Fomba Fiaina Munduruk, Tandindonin-doza Noho Ny Asa Fanorenana Tohodrano Ao Brezila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Febroary 2015 4:00 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Português
Lahatsoratra nivoaka voalohany tamn'ny 11 Desambra 2014 tao amin'ny Agência Pública, niaraka tain'ny fanohanan'ny Mongabay, taminà fizaràna roa: “The Battle for the Munduruku Borders” sy “Decades of Struggle for the Tapajós”, izay samy nosoratan'i Bruno Fonseca. Namboarina hifanaraka aamin'ny eto amin'ny Global Voices ary havoaka anaty fizaràna telo.
Vakio ato amin'ny Global Voiices ny ampahany voalohany [Eng]: “Battle for the Tapajós: Brazil's Construction of Hydroelectric Dams Threatens the Munduruku People“
Ny tena fahasamihafàna amin'ity tranga ity dia ny lesona notsoahana tamin'ny an'ny renirano Xingu River. Taorian'ny nanampiany nibodo ny toerana misy ny tohodrano ao Belo Monte tamin'ny May 2013, nanomboka nanaraka ny fomba ftakiana nataon'ireo indizena tamin'ny governemanta ny Munduruku : nanakalozan'izy ireo ny jono sy ny haza ary ny toeram-pamboleny taminà kitapon-tsakafo (haraton'aina), fiara fitateran'entana sy endrika sakafo hafa natolotra ho toy ny tamby. Mampanahy ny vahoaka ao Tapajós raha ny toe-draharahan'ny fiankinana ara-bola ankehitriny any amin'ireo tanàna manakaiky an'i Belo Monte.